Qaban-qaabadii ugu dambeysay ee qabashada doorashada HirShabelle ee Aqalka Sare ayaa haatan ka socota magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe, iyada oo si weyn loo adkeeyey amniga magaaladaasi. Sida uu qorshuhu yahay maanta oo ay tahay 13-ka September ayaa waxaa la dhageysan doonaan khudbadaha musharixiinta isa soo diiwaan-geliyey oo gaaraya illaa 27 musharax. Guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada ee HirShabelle, Axmed Xasan Diini oo ka hadlay diyaar garowga doorashooyinkaas ayaa ugu baaqay xubnaha musharixiinta ah ee isdiiwaan-geliyey inay ilaaliyaan waqtiga loo ballamiyay in ay hortagaan baarlamaanka. Sidoo kale wuxuu sheegay inay haatan si wanaagsan ay wax ku socdaan, isla-markaana hadal jeedinta, kadib ay guda-geli doonaan qabashada doorashada Aqalka Sare. HirShabelle ayaa doorashada ay qabaneyso waxa ay ka duwan tahay doorashooyinkii ka dhacay maamul goboleedyada kale, waxaana tartanka uu yahay mid furan. Kuraasta qaar sidoo kale waxaa ku tartamaya ugu yaraan 3 xubnood, kuwa ugu badan waa lix xubnood, taas oo muujineysa in HirShabelle aysan kuraasta u xiriin dad gaar ah. Si kastaba doorashooyinka Soomaaliya ayaa maraya meel xasaasi ah, iyada oo doorashadan ay ku xigi doonto mida Golaha Shacabka ee Soomaaliya. | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Qaban-qaabadii ugu dambeysay ee qabashada doorashada HirShabelle ee Aqalka Sare ayaa haatan...
Qaban-qaabadii ugu dambeysay ee qabashada doorashada HirShabelle ee Aqalka Sare ayaa haatan ka socota magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe, iyada oo si weyn loo adkeeyey amniga magaaladaasi. Sida uu qorshuhu yahay maanta oo ay tahay 13-ka September ayaa waxaa la dhageysan doonaan khudbadaha musharixiinta isa soo diiwaan-geliyey oo gaaraya illaa 27 musharax. Guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada ee HirShabelle, Axmed Xasan Diini oo ka hadlay diyaar garowga doorashooyinkaas ayaa ugu baaqay xubnaha musharixiinta ah ee isdiiwaan-geliyey inay ilaaliyaan waqtiga loo ballamiyay in ay hortagaan baarlamaanka. Sidoo kale wuxuu sheegay inay haatan si wanaagsan ay wax ku socdaan, isla-markaana hadal jeedinta, kadib ay guda-geli doonaan qabashada doorashada Aqalka Sare. HirShabelle ayaa doorashada ay qabaneyso waxa ay ka duwan tahay doorashooyinkii ka dhacay maamul goboleedyada kale, waxaana tartanka uu yahay mid furan. Kuraasta qaar sidoo kale waxaa ku tartamaya ugu yaraan 3 xubnood, kuwa ugu badan waa lix xubnood, taas oo muujineysa in HirShabelle aysan kuraasta u xiriin dad gaar ah. Si kastaba doorashooyinka Soomaaliya ayaa maraya meel xasaasi ah, iyada oo doorashadan ay ku xigi doonto mida Golaha Shacabka ee Soomaaliya.
Qaban-qaabadii ugu dambeysay ee qabashada doorashada HirShabelle ee Aqalka Sare ayaa haatan ka socota magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe, iyada oo si weyn loo adkeeyey amniga magaaladaasi.
Previous articleImaaradka Carabta iyo Qatar oo lacag ku kala bixinaya Farmaajo iyo Rooble xili uu khilaaf u dhaxeeyo
Next articleExperts enroule Comment aggraver le blog AprГЁs unique dГ©collement via textos
Qoys ka kooban 11 qof oo dhamaantood isdaldalay & Warbaahinta caalamka oo hadal heysa (Daawo Sawirro)
Dad reer Yurub ah oo laga tarxiilay Afrika & SHAKI ku saabsan in qaaradda ”kas loogu tallaalayo” Covid-19 oo...
Maxay tahay Sababta ku qasbeysa Dowlada dhexe inay si deg deg ah ula Heshiiso Maamul Gobaledyada?
Itoobiya oo Mareykanka kula talisay ‘inuusan faragalin’ arrimaheeda gudaha!
Sawirro:Agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya Oo Safiirada Qaar Kala Hadlay…
Booliiska DF oo diyaariyey SHARCI xadgudub ku ah shacabka oo xasaasi ah
Heegan la geliyay Ciidanka Xasilinta & Howlgal ka culus kii hore oo ay ka qaadayaan….
Dhageyso: Duqa Muqdisho oo u kuurgalay saamaynta ka dhalatay roobabka+SAWIRRO
Waa Kuma Xildhibaan Cawil Daad Oo Maanta Madaxweyne Dani Meel Xun Ukala gaartay?
XASAASI: Xisbiga C/raxmaan C/shakuur oo ka horyimid Sharciga doorashooyinka ee la ansixiyey